Liverpool oo ogeysiisay Philippe Coutinho qorshahooda dib ula soo saxiixashada – Gool FM
Liverpool oo ogeysiisay Philippe Coutinho qorshahooda dib ula soo saxiixashada
(Liverpool) 24 Abril 2020. Naadiga Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inay xiriir la sameysay xiddiggeedii hore ee Philippe Coutinho si ay kagala hadlaan ku soo laabashadiisa garoonka Anfield.
Kaddib xilli ciyaareed amaah ah oo aan muunad wanaagsaneyn oo uu 27-jirkan ku qaatay Bayern Munich, waxaa la rajeynayaa in xagaagan uu iska macsalaameeyo kooxda Barcelona oo iska leh milkiyaddiisa.
Chelsea ayaa ah kooxda ugu cad cad saxiixa kubbad sameeyaha reer Brazil, waxay loollan kala kulmayaan kooxdaha Tottenham Hotspur iyo Paris Saint-Germain marka dib loo furo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Majaladda Sport ee Spain ka soo baxda ayaa horaan warisay in Reds aysan xiiseyn dib ula soo saxiixashada laacibkeedii hore, balse wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in kooxda hoggaamineysa Premier League ay la xiriirtay laacibkeedii hore.
Waxaa lagu soo warramayaa in ujeedda Liverpool ay ula xiriirtay Coutinho ay ahayd inay ogeysiiyaan inaysan la soo saxiixan doonin xagaagan, sidaas darteed uu ka sii tashado kooxaha kale ee ku habboon.
Kaddib 201 kulan oo uu laacibkan u saftay Liverpool, waxa uu dhaliyay 54 gool, ka hor inta uusan bishii January ee 2018 isaga tagin garoonka Anfield.
Balse waa uu ku dhibtooday inuu helo qaab ciyaareed wanaagsan kaddib ku biiristiisii Barcelona, halka kooxda uu hoggaamiyo Jurgen Klopp ay la soo baxday awood dheeri ah oo ay ugu guuleysatay tartanka UEFA Champions League sanadkii hore, waxaana ay raacsadeen koobabka kala ah UEFA Super Cup iyo FIFA Club World Cup, waxaana xusid mudan in 25 dhibcood ay ku hoggaaminayaan horyaalka Ingiriiska.
In Liverpool aysan dareen u ahayn helitaanka adeegga Coutinho waxay waddada u xaareysaa kooxaha kale ee Ingiriiska ka dhisan ee ku dagaallamaya saxiixiisa sida Blues iyo Spurs.
Halyey Barcelona ah oo sheegay kooxda ay tahay inuu ku biiro Coutinho, si uu markale horumar u sameeyo
Juventus iyo Barcelona oo ciyaartoy is dhaafsanaya